7 yakaimbwa nhetembo dzausingakwanise kupotsa | Zvazvino Zvinyorwa
Kuongorora imwe neimwe yenziyo dzeumwe neumwe wevaimbi variko uye vekare venguva yedu zvakaoma. Izvo zvisina kunyanya kuoma kuziva kuti ingani nziyo dzinoita senge nhetembo uye kuti mangani madimikira anozivikanwa uye asingazivikanwe ave nziyo. Iyo zvinyorwa nemumhanzi iwo hunyanzvi hwakabatana zvakanyanya. rwiyo rwese rune nhetembo uye nhetembo dzese dzinogona kuve rwiyo.
Nhasi tinoda kuongorora nhetembo nhatu idzi dzenziyo. Vanonzwika sevanoziva here?
1 «Kune yakaoma elm», yakanyorwa naAntonio Machado uye yakaimbwa naSerrat
2 "Usati wakuda iwe, rudo", yakanyorwa naPablo Neruda uye yakaimbwa naPedro Guerra
3 "Tierra luna", yakanyorwa naMario Benedetti uye yakaimbwa naEugenia León
4 "Mhepo inosanganisa vhudzi rangu", yakanyorwa naPablo Neruda uye yakaimbwa naMiguel Poveda
5 "Ndinokuda", yakanyorwa naMario Benedetti uye yakaimbwa naNacha Guevara
6 "Mashoko aJulia", yakanyorwa naJosé Agustín Goytisolo uye yakaimbwa neboka reLos Suaves
7 "Ini handizove mudiki zvakare", ndima dzakanyorwa nanyanduri Jaime Gil de Biedma uye yakaimbwa naLoquillo
«Kune yakaoma elm», yakanyorwa naAntonio Machado uye yakaimbwa naSerrat
"Kune yakaoma elm muti" Inonzi rwiyo rwakaimbwa neanozivikanwa Joan Manuel Serrat uye yakanyorwa zvese zvakazara nemudetembi wechiSpanish Antonio Machado. Serrat anokwereta yakawanda yakawanda nhetembo naiye anozivikanwa Sevillian mudetembi: «Nziyo», «Saeta», «Nhunzi», «Kuchema uye mavhesi parufu rwaDon Guido» y "Portrait". Dzese dzinoimbwa muma 70s nemuCatalan muimbi.
nemvura yaApril uye zuva raMay,
Centennial elm pachikomo ...
kunanzva makwati machena
kupisa kubva mune imwe nhamo inosiririsa.
Rwizi rusati rwasvika kugungwa runokusundidzira
zvakare kuchiedza uye kuupenyu,
"Usati wakuda iwe, rudo", yakanyorwa naPablo Neruda uye yakaimbwa naPedro Guerra
"Usati wakuda iwe, rudo" Yakanga iri nhetembo dzakasarudzwa dzeChilean Pablo Neruda nemuimbi wechiSpanish Pedro Guerra. Nhetembo yekudanana kwavanowanikwa uye yekunyanyisa kunakisa uye runako. Pedro Guerra haasi iye ega anoziva mikana yemazwi akanyorwa naNeruda. Vamwe vazhinji maartist vanoimba nhetembo dzeChilean. Pakati pavo pane vakafa Antonio Vega chinobata mufananidzo iyo yakaimba iya ya «Handikude kunze kwekunge ndinokuda», "Ode kugitare" kubudikidza Vicente Shamwari, "Mhepo yabvisa bvudzi rangu" sung by flamenco Miguel Poveda o "Nyarara" nemexican Julieta Venegas.
Ndisati ndakuda iwe, rudo, hapana chinhu changa chiri changu:
Ndakazununguka mumigwagwa nezvinhu.
hapana chakaverengwa kana kuve nezita.
nyika yaive yemweya yandaitarisira.
Ndaiziva dzimba dzeashen,
tunnel dzinogarwa nemwedzi,
vane hungara vane hutsinye vachitaura zvakanaka,
mibvunzo yakasimbirira kujecha.
Zvese zvaive zvisina chinhu, zvakafa uye mbeveve,
kudonha, kusiiwa uye kuora,
zvese zvakange zvisingazivikanwe mutorwa,
zvese zvaive zvevamwe uye hapana munhu,
kusvikira runako rwako nehurombo hwako
vakazadza matsutso nezvipo.
"Tierra luna", yakanyorwa naMario Benedetti uye yakaimbwa naEugenia León
Handimborega kuombera mazwi echiUruguayan Mario Benedetti uye nhetembo iyi yakanzi «Nyika Mwedzi» zvaisazove zvishoma. Izvozvowo zvaizofunga Eugenia Léon apo muma80 iye akasarudza kuiimba. Dzimwe nhetembo dzaBenedetti dzakaimbwa ndeidzi: "Ngatiitei chibvumirano", "Dziviriro yemufaro" y "Maodzanyemba aripowo", vese vatatu muizwi ra Joan Manuel Serrat o "Ndinokuda" y "Asi" kubudikidza Nacha guevara.
Kana ndaneta neyakajairika
yekutsamwa uye kubirwa,
kana ndaneta nekuparara uku
Ini ndichaenda kune wechidiki mwedzi
Ah! Pasi-Mwedzi, Pasi-Mwedzi,
Ini ndinopfeka mapapiro endarama nhasi
uye denga kumusoro, kunge chimondo,
kumashure kwaive nerombo rakanaka,
shure kwevakafa nehondo,
Imwe nguva hupenyu hwangu huchiripo
ona kuputika munguva yakapfuura
nyika yangu inosuruvara uye yakajeka
uyo aizvifunga kunge abudirira.
nyika ine nyonganiso uye yakaora,
kubva kumusoro kuno ndinotaura zvakanaka
"Mhepo inosanganisa vhudzi rangu", yakanyorwa naPablo Neruda uye yakaimbwa naMiguel Poveda
Teerera kune aya mavhesi mune iyo flamenco toni yakanyanya chimiro Miguel Poveda runako chairwo. Miguel Poveda anoimba kubva bulerías kune coplas, uye kunyangwe hazvo basa rake remimhanzi rakafambira mberi zvakanyanya, nguva nenguva anoisa zvimwe zvezvinyorwa zvake kumavhesi ekare.
Mhepo inodzingira bvudzi rangu
kunge ruoko rwaamai:
Ini ndinovhura musuwo wendangariro
uye pfungwa inoenda.
Ndiwo mamwe manzwi andinotakura,
kuimba kwangu kunobva kune mimwe miromo.
kumagaro angu endangariro
ine kujeka kusinganzwisisike!
Zvibereko zvekune dzimwe nyika,
mafungu ebhuruu erimwe gungwa,
rudo rwevamwe varume, kusuwa
izvo zvandinoshinga kurangarira.
Nemhepo, nemhepo zvinondikomberedza
kunge ruoko rwaamai!
Chokwadi changu chakarasika usiku:
Handina husiku kana chokwadi!
Kunyepera pakati penzira
vanofanira kunditsika kuti vafambe.
Mwoyo yavo inopfuura nepandiri
vakadhakwa newaini uye vachirota.
Ini ndiri bhiriji risina kumira pakati
moyo wako nekusingaperi.
Dai ndakafa kamwe kamwe
"Ndinokuda", yakanyorwa naMario Benedetti uye yakaimbwa naNacha Guevara
Sezvatakambotaura, Nacha Guevara anga ari mumwe wevaimbi vane rombo rekuisa izwi uye mutinhimira kunhetembo dza Benedetti. Pakati pezvakati wandei, isu takasarudza iyi kune runako rwekunyora kwayo.
Maoko enyu ndiwo mubato wangu
zvangu zvezuva nezuva
Ndinokuda nekuti maoko ako
Kana ndichikuda, imhaka yekuti uri
mudiwa wangu wandinoshanda naye nezvose
uye mumugwagwa nerutivi
Tiri vanopfuura vaviri
maziso ako ndiko kutsinga kwangu
kupesana nezuva rakaipa
Ndinokuda nekuda kwechitarisiko chako
izvo zvinotaridzika uye zvinodyara ramangwana
muromo wako uyo uri wako newangu
muromo wako hauna kushata
Ndinokuda nekuti muromo wako
anoziva kupopota kupandukira
uye nechiso chako chechokwadi
uye nhanho yako yekudzungaira
Uye misodzi yako yenyika
nekuti muri vanhu vandinokudai
uye nekuti rudo harusi halo
kana tsika dzakanaka
uye nekuti tiri vaviri
ndiani anoziva kuti haasi ega
Ndinokuda muparadhiso yangu
ndiko kuti munyika yangu
vanhu vanorarama vachifara
kunyangwe ndisina mvumo
Tiri vanopfuura vaviri.
"Mashoko aJulia", yakanyorwa naJosé Agustín Goytisolo uye yakaimbwa neboka reLos Suaves
Kubvira Paco Ibanez ichafukidza aya mazwi emunyori Goytisolkana, kune akawanda mapoka akabatana kuti avhare iyo. Kana iwe uchida Los Suaves, iwe uchafarira vhezheni yake yedetembo guru iri: "Mashoko aJulia".
Iwe haugone kudzokera kumashure
iwe uchanzwa wakarasika uye uri wega
Murume akangoti mukadzi
akadaro achitorwa mumwe nemumwe
vakaita seguruva havasi chinhu.
Iniwo ndinofunga nezvevamwe varume.
nenzira usatombo taura
Hupenyu hwakanaka uchaona
uchava nerudo uchava neshamwari.
hapana chimwe asi iwe unonzwisisa
"Ini handizove mudiki zvakare", ndima dzakanyorwa nanyanduri Jaime Gil de Biedma uye yakaimbwa naLoquillo
Jaime Gil de Biedma Ndainyora nhetembo iyi "Handimbofi ndakazove mudiki zvakare" pakati pevamwe vakawanda mubhuku rake "Vanhu vechiito." Loquillo akaifarira uye akafunga kuifukidza makore mazhinji apfuura (anopfuura makumi maviri)… Kunyangwe isiri yekupedzisira, Miguel Poveda akaimba zvakare.
sevechidiki vese, ndakauya
kukwegura, kufa, ivo vaive vakarurama
Tinovimba mave kunakirwa zvese ndima nemumhanzi. Kana iwe uchida iyi mhando yechinyorwa umo isu tinosanganisa zvese hunyanzvi: zvinyorwa nemumhanzi, iwe unongofanira kutiudza uye isu tichafara kukuunzira iwe shanduro nyowani, zvakanyanya ikozvino uye kubva kune vanyori vekunze. Unoziva here nhetembo dzakaimbwa dzaunoda kugovana nesu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Kuimba nhetembo
Ricardo Radawski akadaro
Kutenda nhetembo nenziyo idzi
Yaive pati isingakanganwike kwandiri
Pindura Ricardo Radawski
Elias Triana Daza Munda akadaro
Nhetembo dzandangoverenga dzinondiendesa kune rimwe divi, Ndatenda
Pindura Campo Elias Triana Daza
jimena tenezaca akadaro
mutambo wakanaka jsajs
Pindura kuna jimena tenezaca
Diana rangel akadaro
Mhoroi, ini ndiri Diana uye ndinoda kuti unyore kwandiri nhetembo ine zita rekuti Erika, ndapota, ndatenda
Pindura kuna diana rangel
Zvinyorwa zvevana paZuva reVana